Delestazy lavareny Manambana hitokona ireo mpandraharaha ao Ambatondrazaka
Efa mahavaky bandranaina araka ny fiteny any alaotra ny afitsoky ny fahatapatapahan'ny herin'aratra ao Ambatondrazaka.
Lasibatry ny fahasimbana vokatrizany ireo fitaovana samihafa toy ny solontsaina sy ny vata fampangatsiahana any an-toerana. Maro amin'ny olona any Ambatondrazaka anefa no mahandraharaha amin'ny fampiasana solon-tsaina sy ny vata fampangatsiahana. Velon-taraina ireo mpandraharaha ireo ankehitriny ary milaza fa hanao fitokonana raha mitohy izao delestazy any an-toerana izao. Tiana ny mampatsiahy fa farafahakeliny dia in efatra isan'andro ny delestazy any an-toerana ary tsy misy fampahafantarana mialoha ka io no mahatonga ireo mpandraharaha mampiaka-peo.